China Custom Heavy Duty Steel Structure Welded Parts ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |သီဟ
ဂဟေအပျော့စား သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ
ငါတို့က တစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိသောထုတ်လုပ်သူ၎င်းသည် နှစ် 20 တိုင် စိတ်ကြိုက် သတ္တုထုတ် လုပ်သော ထုတ်ကုန်များကို အထူးပြု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ပုံနဲ့အညီ ငါတို့လုပ်လို့ရတယ်။ကျေးဇူးပြု၍ အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်ရယူရန် သင်၏ ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးသံမဏိ စက်ပစ္စည်း ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် သံမဏိ စားပွဲများ။
လုပ်ငန်းစဉ်- ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ဂဟေ၊ပွတ်။
သံမဏိဘောင်ထုတ်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူ၊ သင့်ပုံဆွဲခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါ၊ အခမဲ့ခန့်မှန်းချက်ရယူပါ။
ထုတ်ကုန်နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဇယား
ထုတ်ကုန်များ Sheet Metal Fabricationဘောင်များ၊ ကွင်းကွင်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ မတ်တပ်ရပ်များ၊ စားပွဲများ၊ လက်ရန်းများ၊ ကင်များ၊ တွန်းများ၊ အကာများ၊ အိတ်များ၊ သတ္တုကိရိယာများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ စက်ယန္တရားကိုယ်ထည် စသည်တို့။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဥ် မီးတောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း (စွမ်းရည် 1.5 မီတာ *6မီတာ၊ အပျော့စားသံမဏိ 0.8-25 မီလီမီတာ၊ သံမဏိ 0.8-20 မီလီမီတာ၊ အလူမီနီယမ် 1-15 မီလီမီတာ)၊ ကွေးခြင်း (25 မီလီမီတာ မက်စ်)၊ ဂဟေဆော်ခြင်း (MIG၊ TIG၊ အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ခြင်း စသည်) ), Punching, Stamping, Machining စသည်တို့။
အဓိကစျေးကွက် သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့် အခြားနိုင်ငံများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်သတ္တုအမျိုးအစားကို လိုအပ်သည်ပေါ်မူတည်၍ အဓိကဂဟေဆော်နည်း3မျိုးကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းနှင့် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါသည်။
TIG သည် Tungsten Inert Gas ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက် အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် အထူးပြုထားသော ကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံး လိုအပ်ပါသည်။ TIG ဂဟေဆက်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်သူလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါ အလွန်ကွဲပြားပြီး အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ကြီးမားသော ပရောဂျက်အများစုသည် TIG နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။
MIG သည် Metal Insert Gas welding ကို ကိုယ်စားပြုပြီး လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။MIG နည်းလမ်းတွင် ဂဟေတူးကိရိယာမှတဆင့် အားဖြည့်ပေးသော ပါးလွှာသော ဝါယာကြိုးတစ်ခု ပါဝင်ပြီး ၎င်းကို ဖြတ်သန်းသွားရာလမ်းတစ်လျှောက် အပူပေးသည်။ပိုပါးလွှာသော သတ္တုများနှင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ ဤပိုသိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းကို အများအားဖြင့် ရွေးချယ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂဟေဝန်ဆောင်မှုများတွင် MIG ဂဟေဆော်ခြင်းအပြင် ARC နှင့် TIG တို့ပါဝင်သည်။
ARC ဂဟေဆက်ခြင်း-အပျော့စား သံမဏိကို အသုံးပြု၍ သတ္တုနှင့် ပစ္စည်းများ ပိုမိုထူလာသောအခါတွင် အသုံးပြုပါ။
ပြီးခြင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂဟေဆော်ခြင်းကို ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်၊ ကြေးမုံအရောင်တင်ခြင်းနှင့် အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းမှ အပြီးသတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်အချို့
1. သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသလား။
2: မင်းရဲ့ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်ချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် 10 ရက်မှ 25 ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် ပမာဏအရဖြစ်သည်။
3- ငွေပေးချေမှု စည်းမျဉ်းများ ကရော ဘယ်လိုလဲ။
30% T/T ကြိုတင်၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ လက်ကျန်ငွေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကိုပင် စစ်ဆေးရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
4: နမူနာများ ပေးပါသလား
ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့နမူနာကို ရနိုင်ပါတယ်။ပစ္စည်းနှင့် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍5ရက်မှ7ရက်ကြာသည်။
5. မင်းရဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်တွေက ဘာလဲ။
● စာရွက်သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း။
● စာရွက်သတ္တုတံဆိပ်တုံးထုခြင်း/ ဂဟေဆော်ခြင်း/CNC အပေါက်ဖောက်ခြင်း/လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း
● လေးလံသောသတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း။
● အခြားသော စိတ်ကြိုက်သတ္တုအကာအရံများ
6. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို သင်မည်ကဲ့သို့အာမခံသနည်း။
ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ကိုးကားချက်တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို မည်သို့ကယ်တင်နိုင်သည်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို သင်အမြဲမျှော်လင့်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းရုံသာမက တရုတ်နိုင်ငံတွင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်း ဖြစ်လိုပါသည်။ပုံများပေးပို့ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ကမ်းလှမ်းချက်အတွက် နမူနာများ။
ယခင်- China Fabrication Factory မှ စိတ်ကြိုက် ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးကောင်း တရုတ် Inductor ထုတ်လုပ်သူ Ikp အီလက်ထရွန်းနစ်သည် DMC Coil၊ UL/Ce/RoHS လက်မှတ်ရထားသော
စိတ်ကြိုက် သတ္တုဂဟေဆော်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ
အပျော့စား သံမဏိ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း။
Steel Structure ကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း။
Steel Structure သတ္တုကို Welded လုပ်ခြင်း။
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ Welded အစိတ်အပိုင်းများ
Sierra Leone မှ ron gravatt - 2018.09.16 11:31
လတ်ဗီးယားမှ Patricia - 2018.06.03 10:17
စိတ်ကြိုက် Steel Sheet Metal Fa...
တရုတ်နိုင်ငံမှ စိတ်ကြိုက် Steel Sheet Metal Fabrication Stamping Parts များသည် Professional Stamping Parts များ ရရှိနိုင်သော Carbon steel၊ hot-dipped galvanized steel, stainless steel, aluminium, သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် Surface Treatment electroplating, Powder coating, Conversion, Passivation, Anodize, Alodine, Electrophoresis စသည်တို့ကို ထုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် Stamping-Secondary Stamping-Punching-Threading-Burring-Welding- Polishing- Paint spraying-Packing Tolerance +/- 0.02~0.05 mm Measu...